China Civil Aviation Administration: ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် တရုတ်နိုင်ငံ ၏စွမ်းအင် အသစ် ခရီးသည်တင် ကား များ၏ ထိုးဖောက် မှုနှုန်းသည် ၂၀% ကျော် ခဲ့သည် – Pandaily
Jan 19, 2022, 19:43ညနေ 2022/01/19 23:13:29 Pandaily
ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင်China Automotive Industry Association (CAAM) မှ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်တရုတ် ၏စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ်များ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းချ မှုသည် ၃. ၅ ၄၅ သန်းနှင့် ၃. ၅ ၂၁ သန်း အသီးသီး ရှိကြောင်း ထောက်ပြသည်။ စျေးကွက် ဝေစု ၁၃. ၄% ဖြင့် ၂၀၂၁ အကုန်တွင် ၁. ၆ ဆ တိုးတက်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အနက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ တွင် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ရောင်းချ ခြင်းသည် ၅၁ ၈၀၀၀ နှင့် ၅၃ ၁၀၀၀ အသီးသီး ရှိခဲ့ပြီး ၁. ၂ ဆတိုး တက် ခဲ့ပြီး ၁. ၁ ဆတိုး ခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် နောက်ဆုံး လတွင် စွမ်းအင် ယာဉ် စျေးကွက် အသစ် ၏ ထိုးဖောက် မှုနှုန်းသည် ပထမဆုံးအကြိမ် ၂၀% ကျော် ခဲ့ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် များ၏ ထိုးဖောက် မှုနှုန်းသည် ၁၉. ၁% နှင့် ၂၀. ၆% သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ယခင်က China Automobile Industry Federation မှ ထုတ်ပြန်သော ကိန်းဂဏန်းများအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် တရုတ်၏ မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းချ မှုသည် ၂၆. ၀ ၈၂ သန်းနှင့် ၂၆. ၂ ၇၅ သန်း အသီးသီး ပြီးစီး ခဲ့ပြီး ၃. ၄% နှင့် ၃. ၈% အသီးသီး တိုးတက်ခဲ့သည်။ ယင္း တို႔ အနက္ ဒီဇင္ ဘာက ၂ ဒသမ ၉ ၀၇ သန္း ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ် ခဲ့ၿပီး ၂ ဒသမ ၇ ၈၆ သန္း ေရာင္းခ် ခဲ့သည္။
ခရီးသည်တင် ကား များအနေဖြင့် နှစ်စဉ် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းချ မှုသည် ၂၁. ၄ ၀၈ သန်းနှင့် ၂၁. ၄ ၈၂ သန်း အသီးသီး ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၇. ၁% နှင့် ၆. ၅% တိုးတက်ခဲ့သည်။
အဓိက မော်တော်ကား ထုတ်လုပ်သူ များအနက် BYD သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် ၅ ၉၃, ၇ ၄၅ စီးကို ရောင်းချ ခဲ့ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၂ ၃၁. ၆% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ၃ ၂၀၈ ၁၀ သည် စင်ကြယ်သော လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် များနှင့် ၂ ၇၂, ၉ ၃၅ ဟိုက် ဘရစ် powertrain များဖြစ်သည်။ Tesla China သည် တစ်နှစ် ပတ်လုံး ကား သစ် ၄ ၈၄, ၁၀၀ ရောင်းချ ခဲ့ပြီး ၃၂၀, ၇၀၀ ကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရောင်းချခဲ့သည်။
အသစ် တီထွင်ထားသော ကား ကုမ္ပဏီ များအနက် Xiaopeng Automobile, Lee Automobile နှင့် NIO Inc တို့သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ကား အစီးရေ ၉၀, ၀၀၀ ကျော် ရောင်းချခဲ့သည်။ ထိပ်တန်း ကား သစ် ကုမ္ပဏီ ခြောက် ခုသည် တစ်နှစ် ပတ်လုံး စုစုပေါင်း ကား အစီးရေ ၄၃ ၇၀၀၀ တင်ပို့ ခဲ့ပြီး စံချိန်တင် မြင့်တက်ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:၂၀၂၁ စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် တန်ဖိုး ထိန်းသိမ်း ခြင်း စာရင်း ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်
၂၀ ၂၂ ကို မျှော်လင့် လျက် တရုတ် ၏စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် များ၏ ရောင်းအား သည် ၅. ၁ သန်းမှ ၅. ၅ သန်း အထိရှိ မည်ဟု ခန့်မှန်း ထားပြီး ၅၀% ကျော် သော လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားမှု ကိုဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားသည်။
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွက် အထူးသဖြင့် Tesla သည် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် တစ်နှစ်လျှင် ကား အစီးရေ ၃ သန်း ထုတ်လုပ် နိုင်ပြီး Tesla Shanghai Gigabit Manufacturing Hub သည် တစ်နှစ်လျှင် ကား အစီးရေ ၇၅၀, ၀၀၀ ထုတ်လုပ် နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ China Capital Management ၏ခန့်မှန်း ချက်အရ ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် Tesla ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းချ မှုသည် ယူနစ် ၁. ၇ သန်းကျော် အထိရောက်ရှိ နိုင်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် တိုးတက်ခဲ့သည်။
ဒေသတွင်း ထိပ်တန်း ကုမ္ပဏီ များအနက် BYD ၏ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည်သည် တစ်နှစ်လျှင် မော်တော်ယာဉ် ၁. ၂ သန်း အထိရှိသည်။ ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် BYD ၏ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည်သည် တစ်နှစ်လျှင် ကား အစီးရေ ၁. ၇ သန်း အထိရောက်ရှိ လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် BYD သည် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် ယူနစ် ၁. ၅ သန်း ရောင်းချ ရန် ပစ်မှတ် ထားခဲ့သည်။
ကား သစ် ကုမ္ပဏီ များအကြား NIO , Xiaopeng နှင့် Li Auto တို့ ၏စုစုပေါင်း ရောင်းအား သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ၂၈၀, ၀၀၀ မှ ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် ၅ ၁၀, ၀၀၀ ကျော် အထိတိုးလာ နိုင်သည်။
Auto Jan 19 ဇန်နဝါရီ 19, 2022